महिला सांसदले उठाए ब, ला, त्का, रीलाई मृ ,त्यु, द, ण्ड वा लि,,ङ्ग,,छे,,दनको सजाय ! के सम्भव होला त ? हेर्नुहोस आज असोज १३ गतेका मुख्य समाचारहरु – Complete Nepali News Portal
महिला सांसदले उठाए ब, ला, त्का, रीलाई मृ ,त्यु, द, ण्ड वा लि,,ङ्ग,,छे,,दनको सजाय ! के सम्भव होला त ? हेर्नुहोस आज असोज १३ गतेका मुख्य समाचारहरु
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ३२ जना महिला सांसद १६ वर्षमुनिका बालिका ब.ला.त्का.र गर्नेलाई कडा सजायको पक्षमा उभिएका छन् । यसका लागि सार्वजनिकरुपमा दबाब सिर्जना गर्न उनीहरुले ‘टाक्सफोर्स’ नै गठन गरेका छन् ।
सोमबार भएको महिला सांसदको भेलामा ब,ला,त्का,रीलाई कस्तो सजाय दिन सकिन्छ भन्नेबारे गर्मागर्मी बहस भयो । भेलामा उपस्थितहरुले बालिका ब,ला,त्कार गर्नेलाई मृ,त्यु,द,ण्डदेखि लिंग,छेदनको प्रावधान हुनुपर्नेसम्मका माग राखे । धेरैको मत भने मृ,त्यु,दण्डको पक्षमा थियो । यही आवाजलाई बुलन्द गर्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसद बिन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा ‘टाक्सफोर्स’ गठन गरिएको हो । यो संगै आजका मुख्य समाचारहरु तलको भिडियोमा हेर्नुहोस :